धमाधम जोर्नी प्रत्यारोपण गरिँदै – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १७ गते १०:०७
राजधानी काठमाडौँ र विदेश धाउन नपर्ने गरी भरतपुर अस्पतालमा जोर्नी प्रत्यारोपण भइरहेको छ। डा. श्रवणकुमार थापाको नेतृत्वमा जोर्नी प्रत्यारोपण तिव्रता पाएको छ।
हाडजोर्नी नसा तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ रहेका डा. थापाले विगत छ वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा जोर्नी प्रत्यारोपण गर्दै आएका छन्। यस अवधिमा अस्पतालमा मात्रै ८० भन्दा बढीको प्रत्यारोपण भइसकेको छ। साँझ, बिहान र बिदाका दिनमा उनको चौबीसकोठीको मौलाकालिका अस्पतालमा यो सेवा दिँदै आएका छन्। मौलाकालिकामा मात्रै २० भन्दा बढी जोर्नी प्रत्यारोपण गरेको उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमण कारण नियमित यस्ता शल्यक्रिया कम भएका भए पनि पछिल्लो समय नियमित गरिएको छ। घुँडा, पुठो, कुहिनोलगायतको प्रत्यारोपण गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न धातुको मिश्रणबाट बनेको मेटल एलोए प्रयोग गरिँदै आएको छ। त्यसको मूल्य महँगो पर्ने हुँदा प्रत्यारोपण खर्चिलो हुने गरेको थापा बताँउछन्। ‘जोर्नी प्रत्यारोपण गर्दा अमेरिकामा बनेका मेटल एलोएलाई दुई लाख हाराहारी र भारतमा बनेकालाई एक लाख ५० हजार हाराहारी पर्दछ,’ उनले भने।
यसका अतिरिक्त सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया शुल्क केही सस्तो हुन्छ भने निजीमा केही महँगो पर्दछ। यो मुख्य (मेजर) शल्यक्रिया गरेर प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छ। उनको भनाइमा बढी संख्यामा ६५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई यो समस्या पर्ने गर्दछ। जोर्नी खिइएर, बाथ रोगका कारण, चोटपटक लागेर, क्षयरोगजस्ता संक्रामक रोगका कारण र वंशाणुगत कारण यो समस्या देखिने गर्दछ। कतिपय बालबालिकामा जन्मजात यो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ। अत्यधिक मदिरा र स्टेरियड औषधिका कारण पनि जोर्नीमा समस्या आउने गरेको छ।
थापाले हाडजोर्नी तथा नसामा स्नातकोत्तर गरेपछि तीन महिना जोर्नी प्रत्यारोपणसम्बन्धी दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा तालिम लिएका हुन्।यस्तै भारतकै मुम्बई र हैदारावारमा रानावत कन्फ्रेन्ससँगै उनले प्रत्यारोपणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए। यस खालका तालिम नेपालमा पनि हुने गरेका छन्। ती अधिकांश तालिममा थापाको सक्रिय सहभागिता हुने गरेको छ।
नेपालमा प्रत्यारोपणमा विज्ञ चिकित्सक कम भएको जनाउँदै उनले समस्या लिएर धेरै बिरामी आउने गरेका बताए। उनको भनाइमा सरकारले अन्य जटिल रोगमा झै जोर्नी प्रत्यारोपणमा पनि सुविधा दिएमा धेरैले राहत पाउने थिए। आर्थिक अभावकै कारण प्रत्यारोपण गर्न परेर पनि यो सुविधा पाउन नसक्ने धेरै भएको डा थापा बताए ।
एक पटक प्रत्यारोपण गरेपछि १५ देखि २५ वर्षसम्म काम गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । विदेशमा भन्दा कम खर्चमा यही उपचार हुने भएकाले नेपालमै उपचार गर्न उनी सुझाव दिन्छन्। दीर्घरोगबाट बच्न, योगा, व्यायाम गर्न, अत्यधिक मदिरा सेवन नगरेमा केही हदसम्म जोर्नीको समस्या कम गर्न सकिने थापाको भनाइ छ। नेपालमा जोर्नी प्रत्यारोपणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम कम भएको चिकित्सक बताउँछन्। विदेशमा साना साना जोर्नी प्रत्यारोपण र रोबटिक प्रविधि हुने गरेको भन्दै उनले नेपालमा यसको थालनी भइनसकेको बताए।